Lantonoara Hacks Russell - Lantonoara Of The Day
Ny zavatra voalohany ianao hianatra momba Funnels in 2018 izany ve Russell Bronson no malaza indrindra pahaizana manokana momba ny lohahevitra izany andro izany ary ny manerana ny toerana.
Tsy kisendrasendra, izany dia tsy voninahitra barotra.
Ny olona mahalala ny fomba hiatrehana funnels etika mampiasa fomba izay tena miasa.
Google ny "Lantonoara Hacks Russell" ary ianao dia hitarika ny fampiofanana maimaim-poana webinar izay manazava fa niditra avy amin'ny fanangonana ny lousy nokaramaina karama bebe tsy hanao asa fampivelarana ny akany lantonoara izay mahatonga azy ahazoana $18,000 andro.
Lehilahy io tsy mandeha manodidina ny kirihitra, dia ny toetra ambony nivarotra ny vokatra fa ny fanaovana vola azy, ary izy no vonona ny hizara ny zava-miafina ny na iza na iza no vonona hiasa mafy mba ho amin'ny tompon-ny anjara.